I-PCT Letrozole powder --- Izinto ezinhlanu kufuneka ndiyazi !!! | AASraw
/Blog/Letrozole/I-PCT Letrozole ipowder eluhlaza-Izinto ezintlanu ekufuneka ndizazile !!!
ezaposwa ngomhla 11 / 05 / 2017 by 阿斯劳 bha liweyo Letrozole.
Q1: Ngaba I-Letrozole powder eluhlaza steroid?
A1: I-Letrozole ipowder eluhlaza, i-steroid ye-raw material ye-Letrozole, inhlobo yeHormore, ingenayo i-steroid, inokwakhelo lwe-PCT, abanye bafana Tamoxifen,Clomid,Aromasin,
Halotestin, IAnastrozole, Nantsi ulwazi oluyisiseko:
Indawo yokunyibilikisa: 181-183 ° C, Umbala: Mhlophe okanye ucime umgubo omhlophe we-rystalline, abantu bathenga i-Letrozole ihlala igcinwe kwigumbi lobushushu.Ukuthelekiswa nezinye iifom, i-Letrozole powder iphezulu, ubunyulu obuphezulu, ubuninzi obukhulu, iindleko ezingaphantsi, ngokutsho kwabasebenzisi abaninzi , Ngubani othenge i-intanethi ngaphambili, i-10 gram ye powder ingenza amawaka eepilisi / iipilisi.
Q2: Ngaba i-Letrozole powder esetshenziselwa umhlaza wesibeleko?
A2:I-Letrozole powder eluhlaza ipowder iyathandwa phakathi kwabafazi, isetyenziswa njengechiza lomhlaza webele, kodwa ayisiyiyo le nto kuphela, Kukwasebenza neLetrozole ekwakheni umzimba, ithathwa njengelinye lamachiza anamandla okukhuthaza inqanaba lokunciphisa umzimba kunye ukunyusa ukutshisa kwamafutha. Kwakhona kuncedo ekunciphiseni amanqanaba e-LDL (okubi) i-cholesterol kunye nokukhuthaza izinga le-spermatogenesis kwizigulane zesilisa ezithintekayo kwi-azoospermia kwaye zingapheli i-endometriosis. Isisombululo sesithathu kwisizukulwana sokuthi i-aromatase oral inhibitor, i-Letrozole inzuzo, isetyenziselwa ukukhuthaza ukuphuculiswa okuphawulekayo ngokuhambelana ne-hormone yokukhula, i-cortisol, i-SHBG, ukuveliswa kweproteins, i-HDL kunye nokukhula nokuphuhliswa kweempawu zesondo. Ukuba oko kwakungekho konke, i-Femara nayo inakho ukukhuthaza umsebenzi wokuzivikela ngomzimba, amazinga e-cholesterol enempilo, impilo edibeneyo, umsebenzi wokuqonda, kunye nokukhula kwemisipha ngexesha lokunciphisa okanye ukuphelisa nemiphumo yecala ye-estrogenic njenge-oily skin, gynecomastia kunye nokugcinwa kwamanzi
Q3: Ngaba i-Letrozole powder esetyenziswa njenge-AI i-chioce efanelekileyo?
A3: Kuba uninzi lwabadlali abaphucula ukusebenza xa ukhetha i-inhibitor ye-aromatase kukho izigqibo ezintathu eziqhelekileyo; Arimidex, Aromasin kunye neLetrozole kwaye nganye iyafana ngokufanayo. Injongo ye-aromatase inhibitor ngokuyinhloko ilele egameni ngokwayo; ukuvimbela i-enzyme ye-aromatase. Umsebenzisi we-steroid oku kubaluleke kakhulu kuninzi andbolic androgenic steroids iya kuguqula i-estrogen ngale nkqubo. Ukuguqulwa kunye ne-buildup ye-estrogen kunokukhokelela kwimiphumo emininzi engafunekiyo, ngoko i-Letrozole isebenza ngokuthintela izinga le-estrogen, ukunciphisa inzakalo emzimbeni wethu.
Q4: Ingakanani i-letrozole endiyithathayo?
A4: Elona dosi liphezulu leLetrozole elinokuthi lisetyenziswe ngumsebenzisi liya kuba zii-2.5mgs ngosuku. Kubonakalisiwe kwizifundo ezininzi ukuba le milinganiselo iya kuphelisa phantse yonke i-estrogen emzimbeni phantse kubo bonke abantu. Naliphi na idosi ephezulu kunale ayinakufuneka. Ngaphandle kokukwazi ukonyusa inani le-hormone ye-lutenizing, i-follicle evuselela i-hormone, kunye ne-hormone yesondo ebopha i-globulin kubasebenzisi be-Letrozole inokuba yinto engeloncedo xa isetyenziswe kunyango lwasemva komjikelo. Oku kungenxa yokubanakho kwekhompawundi ukuqhuba amanqanaba e-estrogen asezantsi kakhulu ngexesha lokusetyenziswa. Nje ukuba ikhompawundi iyekwe oku kungakhokelela kwisiphumo se- "rebound" kumanqanaba e-estrogen ngezi ziphezulu kakhulu, into ekufuneka ithintelwe ngexesha okanye emva konyango lwasemva komjikelo.
Q5: Yintoni eyenzekayo xa ikhona ngaphezulu?
A5: Akungathandabuzeki ngolu hlobo, amanqanaba aphantsi we-estrogen aya kunceda ekumiseni umzimba kunye nokunyanzeliswa okukhulu kunokukhokelela kwingxaki.
I-Letrozole inomile kwaye ibonakale i-physique kakhulu ishiya iplati kwaye ibuthathaka ngokubonakala.
Ngaloo ndlela, indlela abayila ngayo ukutya kwabo xa ukusebenzisa loo myeza ngumbuzo omele ucinge ngawo, ngokwenene, ukutya kuyinyani yonke into ephathelene nokuphucula ukusebenza kunye nokulinganisela kwezondlo.
Kwakhona, ukugqithiswa kwe-Letrozole i-powder eluhlaza kuya kubangela amazinga aphantsi e-estradiol, oku kungakhokelela kwimiphumo emibi yokulahleka kwe-libido, ukuxinezeleka, intlungu edibeneyo, okanye imbonakalo ye-musculature. Ukuba ungagqithwanga ngexesha usebenzisa i-steroids enokuphuhliswayo njenge testosterone okanye Dianabol, I-estradiol ephezulu ngokungavumelekanga nayo ingabangela ukulahleka kwe-libido okanye ukudandatheka, kungabangela ukugcinwa kwamanzi, kwaye kunokubangela okanye kwandise i-gynecomastia.
Yintoni ekusetyenziselwa ngayo i-Nandrolone injano? Amachiza e-PCT okubuyisa –Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin